Baaritaan ay maanta daabacday wargayska The Guardian ee Uk ka soo baxda ayaa wuxuu qoray in weeraradii 7-da bishaan luulyo lala beegsaday meelo ka mid ah London ay ugu wacnayd taageeradii Blair ee uu Mareekanka kagala qaybqaatay duullaankii Ciraaq, aragtidan sida uu wargayska sheegay waxaa qaba saddax meelood laba meel shacabka Ingiriiska.
Tirakoobkan ay diyaarisay mac-hadka ICM ayaa tilmaantay in shacabka ingiriiska 33% ay aaminsan yihiin in Ra’iisal wasaarahooda Tony Blair uu “inta badan” mas’uul ka yahay qaraxyadii London ka dhacay, halka 31% ay “in yar” oo shacabka ingiriiska ka mid ah ay mas’uuliyadda qaraxaas dusha uga tuureen Blair duullimaadka ciidamdiisa ee Ciraaq sannadkii 2003-kii.
ka bilow midig: Hussain, Lindsay, Khan iyo Tanweer
Dadkii ay mac-hadka ICM waraysatay ayaa 28% sheegay inaynan jirin wax xiriir ah oo ka dhaxeeya qaraxyadii dhowaanta ka dhacay London iyo duullamaadkii ciidamada Britain ee Ciraaq.
Inkastoo maamulka Blair ay gaashaanka ku dhufteen inay xiriir ka dhaxeeyaan qaraxyadii London iyo duullamaadkii Ciraaq, haddana waxaa si weyn u soo if baxaya cabsida shacabka ingiriiska ay ka qabaan in markale lala beegsado qaraxyo kaloo ka dhaca dalka meelo ka mid ah.
Baaritaanadii booliiska Ingiriiska ay sameeyeen ayay ku sheegeen in qaraxyadii London ka dhacay 7-dii bishaan ay fuliyeen 4 nin oo 3 ka mid ah ay ka soo jeedaan Pakistan, halka kan afaraadna oo Jamaican yahay. Saddaxda dhalashadooda bakistaanka yihiin waa Shehzad Tanweer (22 jir), Mohammad Sadique Khan (30 jir), iyo Hasib Hussein (19 jir).
Maadaama nimankan ay ku dhinteen qaraxyadaas, haddana waxay booliiska daba joogaan siday ku heli lahaayeen goobihii iyo maskaxdii ka danbaysay qaraxii London oo ay ku dhinteen wax ka badan 56, halka dhaawucuna aad u badan yahay.
Imaamyo miisaan culus ku leh ummadda muslimiinta dhexdooda ayaa si ba’an u canbaareeyay qaraxyadaan, iyagoo sheegay inay sumcad xumo hor leh ay u soo jiidayso islaamka iyo muslimiinta. Dr. Yusuf Al-Qaradaawi ayaa bayaan u soo diray shabakadda islaamiga ee islamonline ku sheegay inuu aad uga xun yahay qaraxyadii ka dhacay London, isagoo dheegay inay shareecada islaamka xarimtay in la daadiyo qof aan waxna galabsan oo aamin ah.
“Falal waxshi ah oo aad u foolxun oo weliba islaamka si weyn u diiday” ayuu sheekh Yusuf Al-Qaradaawi qoraalkiisa ku sheegay.
Waxaa la ogsoon yahay laga soo billaabo maalintii ay dhaceen qaraxyadii London in muslimiinta loo gaystay 300 falal aargoodsi ah oo isugu jira dil, waxyeello la gaarsiiyay masaajiddo iyo aflagaadooyn iyo falal cunsurinimo si joogto ah loola beegsanayay muslimiinta ku nool carriga England.
Faafin: July 19 , 2005